२०७४ सालमा सुनको मूल्य २८ सय बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home बजार २०७४ सालमा सुनको मूल्य २८ सय बढ्यो
बजार, मुख्य खबर 94 views
२०७४ सालमा सुनको मूल्य २८ सय बढ्यो
चैत ३०, काठमाडौं (अस) । वि.सं. २०७४ सुन चाँदीको मूल्यमा धेरै उतारचढाव देखियो । यस वर्ष सुनको मूल्य रू. २ हजार ८ सय बढेको छ । वर्षको पहिलो दिन रू. ५५ हजार ७ सयमा किनबेच भएको सुनको मूल्य अन्तिम दिन बढेर रू. ५८ हजार ५ सय पुगेको थियो । यस वर्षको चैत २९ गते सुनको उच्च मूल्य रू. ५८ हजार ९ सय पुगेको थियो । सोही वर्ष असार २७ गते न्यून मूल्य रू. ५२ हजार ८ सयमा झरेको थियो ।
नेपाली चाडपर्व तथा विवाहको मौसममा मूल्य घटवढ हुने गरेको सुनको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय वस्तु बजारमा भएको उतारचढावले पनि स्थानीय बजारलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । त्यस्तै, एक वर्षमा चाँदीको मूल्य रू. ७० ले घटेको छ । वर्षको पहिलो दिन रू. ८ सय १५ मा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य घटेर रू. ७ सय ४५ पुगेको हो ।
वर्षको अन्तिम दिनमा सुन प्रतिऔंस १ हजार ३ सय ३६ दशमलव १३ डलरमा किनबेच भएको छ । वर्षको पहिलो दिनको तुलनामा यो मूल्य ५२ दशमलव १२ डलर बढी हो । त्यस्तै, वर्षको पहिलो दिन रू. १ सय ३ दशमलव ३६ रहेको डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर अन्तिम दिन प्रतिअमेरिकी डलर १ सय ४ रुपैँया ७२ पैसा रहेको छ ।
८ बैशाख २०७५, शनिबार १९:४५
८ बैशाख २०७५, शनिबार १९:२८